Iindaba zeGeoengineering -I-AutoDesk, iBentley kunye ne-Esri-Geofumadas
Ikhaya/ArcGIS-ESRI/Iindaba zeGeo-engineering -I-AutoDesk, iBentley kunye ne-Esri
I-AUTODESK ANNOUNCES I-REVIT, IMISEBENZI NAKWESIVIVI 3D 2020
I-Autodesk yamemezela ukuqaliswa kwe-Revit, InfraWorks kunye ne-Civil 3D 2020.
Nge-Revit 2020, abasebenzisi baya kuba nako ukudala amaxwebhu acacileyo kunye namaxwebhu acacileyo abonisa bhetele injongo yokuyila, udibanisa idatha kwaye avumela ukusebenzisana nokuhanjiswa kweeprojekthi ngokukhululeka kwamanzi. Kuya kunceda ukunciphisa ixesha elizinikezelwe kwimisebenzi yememori kwaye liya kubangela ukuvelisa umsebenzi ophezulu.
I-3D ye-2020 yoLuntu ikwabonelela ngeendlela zokuphucula ukusebenza kunye nokusabalalisa, ukuphucula i-BIM kunye nokusebenza kakuhle kwemveliso, ngokukodwa kwiiprojekthi ezinkulu kunye ezinzima. Inguqu yakutshanje ifaka iimpawu ezintsha ezifana: IDynamo yezoLuntu I-3D, eya kuhlaziya imisebenzi ephindaphindiweyo kwaye incede umsebenzisi athole eminye imodeli yazo.
Nge-InfraWorks 2020, i-Autodesk iyaqhubeka nokuzinikela kwayo ekuhlanganiseni i-BIM ne-GIS. Intsebenziswano kunye no-Esri iye yavumela ukuba inzuzo yexabiso le-GIS lifumaneke esidlangalaleni okanye ligcinwe ngaphakathi, ngendlela elula eyenza ukugwema ezininzi iinguqulelo ezafuneka ngaphambili. Le nguqulo yongeza amandla okugcina idatha ehleliweyo ye-InfraWorks kwi-store ye-Esri.
U-Esri ufumana indoo.rs aze amemezele ukuqaliswa yiArcGIS Ngaphandle
I-28 ngoFebruwari 2019, uEsri, inkokeli yehlabathi kwindawo yengqiqo, wachaza ukuthengwa kwe-indoor GmbH, umniki-mboneleli wehlabathi jikelele we-technology positioning system (IPS).
Isofthiwe ye-indoo.rs iya kuba yinxalenye ye-ArcGIS ngaphakathi kwe-Esri, umkhiqizo omusha weemephu ovumela ukulungiswa kwangaphakathi kweendawo zenkampani, izitolo, indawo zokurhweba, ii-airports kunye nokunye. Kwakhona, ukuthengwa kuya kunika abasebenzisi be-platform ye-Esri ye-ArcGIS ngeenkonzo ezidibeneyo zeendawo ze-IPS ukuxhasa imephu yangaphakathi kunye nohlalutyo. Ikomkhulu le-indoo.rs liya kusebenza njengeziko elitsha le-R & D elisuka eVienna, e-Austria, ligxile kwi-IPS.
"I-Indoo.rs ngumboneleli ohamba phambili we-IPS software kunye neenkonzo, esebenza nemibutho yehlabathi jikelele njengezikhululo zeenqwelomoya zamazwe ngamazwe, izikhululo zikaloliwe ezinkulu, kunye nekomkhulu leenkampani, kwaye ndivuyiswa kukwamkela inkampani kwintsapho yakwa-Esri," watsho uBrian. Cross, umlawuli weenkonzo zobungcali e-Esri. "i-indoo.rs 'iteknoloji, amava kunye nobunkokeli kwintsimi ye-IPS iya kuba luncedo olukhulu kubathengi bethu abafuna ukuzisa amandla e-GIS ngaphakathi."
"Ukuba yinxalenye ebalulekileyo ye-portfolio yemveliso ye-Esri ivumela ukuba siqhubeke nokubonelela ngeenkonzo zethu kwinqanaba eliphezulu lobuchwephesha," kusho uBernd Gruber, umseki we-indoo.rs.
"Siyibonile imarike ye-IPS iqhuma kule minyaka yamva nje," utshilo uRainer Wolfsberger, i-CEO ye-indoo.rs, "kwaye abathengi bethu bamashishini babonise umdla omkhulu ekudityanisweni okunzulu kunye nobuchwepheshe be-IPS, ngaloo ndlela bevula izibonelelo. yombutho wakho.”
I-Bentley Systems itshabalala kwiMisebenzi yamanzi yeDijimenti kwiisombululo zengxubeko yamanzi angcolileyo
I-Bentley Systems ibhengeze utyalo-mali olucwangcisiweyo kwi-Digital Water Works, isisombululo sehlabathi kunye nesisombululo samadama edijithali.
Olu bambiswano luya kunceda iinkampani ukuba zandise ubukhokeli babo, zizise izisombululo ezintle zamaphini edijithali asetyenziswe kwiziseko zenkampani okanye abatyali-mali abanjiswe kwihlabathi lamanzi angcolileyo emhlabeni.
ImiSebenzi yamanzi eNdijithali iyaziwa ukuncedisa amanzi kunye namanzi angcolileyo asebenzisa i-platform ye-geospatial infrastructure platform. Ngokuvumelana nesivumelwano, inkampani ijolise ukuphunyezwa kwezicelo zayo zokuhlanganisa ngokubanzi kwesoftware yezorhwebo (i-COTS), njengeBentley Systems 'OpenFlows kunye neTwin iminikelo. I-Bentley Systems iya kunikezela iilayisenisi ngqo kwiiNkonzo zabaManzi beMigodi yamanzi. Uya kuba nelungelo lokutyumba abalawuli ababini abaya kuba yinxalenye yeBhunga leMisebenzi yeMigodi yamanzi.
Ngesi sihlandlo, uPaul F. Boulos, umseki kunye ne-CEO ye-Digital Water Works, wathi: "Siyavuya kwaye siwongekile ukufumana olu tyalo-mali luvela kwi-Bentley. Uluhlu lweziseko ezingundoqo zeemveliso ezingamawele edijithali ziya kuqaliswa ngokwezigaba kwisithuba seenyanga ezintlanu ukuya kwezilishumi ezizayo, kwaye kwinyanga ezayo siza kumisela inkqubo yokwamkela kwangethuba kuncedo lwamanzi namanzi amdaka kunye neenkampani zobunjineli ezifuna ukunceda ngezicwangciso. yenza uvavanyo lwe-beta yesoftware."
U-Greg Bentley, i-CEO ye-Bentley Systems wabelane: “Utyalo-mali lwe-Bentley Systems kwi-Digital Water Works lubonisa ukuqaphela kwethu ukuba iziko elikhethekileyo lokudibanisa idijithali liya kudlala indima ebaluleke kakhulu ekuncedeni abanini beziseko zoncedo baqonde amandla apheleleyo okusebenza kwamanzi.
Ukunika indlela yakhe yokuqhubela phambili kwedijithali kwizixhobo zeziseko zamanzi zehlabathi, akunakubakho mntu usebenzayo ngaphezu kukaDkt Paul Boulos ekukhokeleni iinjineli zakhe kunye neefemu zobunjineli, ngokusebenzisa i-Digital Water Works, ukuqonda amathuba angenasiphelo ukuba amawele edijithali ngoku avule. ”
Kuthathwe kuwo Umagazini we-Geo-engineering -Junio ​​2019
Iindaba zetekhnoloji kwiGeo-engineering-Juni 2019
Chronicle-FME World Tour Barcelona
Guqulela UTM uhlela yokuhlala Excel